YUFA dia manana mpikambana mihoatra ny 300, ao anatin'izany ny biraon'ny tale jeneraly, birao, departemanta ara-bola, sampana famatsiana, sampana varotra, sampana fikarohana sy fampandrosoana, sampana fanaraha-maso kalitao, departemanta teknolojia famokarana, atrikasa famokarana ary departemanta hafa. Ny sampana tsirairay ao amin'ny orinasa dia manana fizarazarana mazava amin'ny asa, mitantana ny orinasa mifanaraka amin'ny fitsipiky ny orinasa ny YUFA. Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny 30 taona mahery, YUFA dia nanangona traikefa manan-karena sy fiasa maharitra miaraka amin'ny foto-kevitra mandroso, ny haavon'ny fitantanana avo lenta ary ny tombom-barotra tsaratsara kokoa.
YUFA dia nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001-2015 sy ny fanamarinana ny rafitra tontolo iainana ISO14001-2015. Ny fitantanana rafitra dia mitondra fahombiazana bebe kokoa amin'ny orinasa ary kalitaon'ny serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa.
Amin'ny maha-tarika mifehy ny Henan Refractories Association, YUFA dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa amin'ny University of Technology Henan sy oniversite maro hafa, nandamina mpianatra mpianatry ny oniversite mba ho any amin'ny orinasa hanao fiofanana isan-taona. Ny mpiasan'ny orinasa dia tanora indrindra ankehitriny ary manana fahalalana matihanina manan-karena, mamorona tontolon'ny fiaraha-miasa sy fifanampiana.